Safiirka Somaliya ee dalka Kenya oo fariin u diray Ganacsatada Somalida Islii | Baydhabo Online
Safiirka Somaliya ee dalka Kenya oo fariin u diray Ganacsatada Somalida Islii
Xilli maalmihii la soo dhaafay Suuqa Ganacsiga Magaalada Nairobi ee dalka Kenya uu ka taagnaa Rabshado u dhaxeeyay Ganacsatada yar yar ee loo yaqaan Waratada iyo Ganacsatada Dukaanleyda, ayaa arintaasi waxaa ka hadlay Safiirka Somaliya ee dalka Kenya.
Jamaal Maxamed Xasan, Safiirka Somaliya u fadhiya dalka Kenya, ayaa wuxuu sheegay dadka ganacsatada ah ee Xaafada Islii ku dukaameysta in looga baahan yahay inay si nabadgelyo ah halkaasi uga shaqeystaan.
Waxa uu sheegay hadii dadka Somalida ah aysan ka shaqeyn nidaamka suggida ammaanka iyo ku noolaanshaha Nabadgelyada inaysan suuragelin in ciidamada Booliska Kenya ay sugaan ammaanka.
“Runtii waxaan rabaa inaan ka hadlo Suuqa Islii maalmahan waa xirnaa oo arimo ganacsatada dhexdooda ah kuwa dukaamada iyo kuwa waratada ah, Runtii waxaan u mahadcelinayaa Dowladda Kenya oo arintaan soo dhex gashay oo xalisay, waxaan rabaa dadka Somalida ah ee ganacsatada ah waxaan ku dhiiragelinayaa inay ka shaqeeyaan ammaanka, Dowlada waxa ay wadana ay taageeraan.” Ayuu yiri Safiir Jamaal.
Ciidamada Booliska Xaafada Islii ee Somalida ay degto magaalada Nairobi ayaa xaliyay buuqii ka taagnaa Suuqa Ganacsiga Islii, waxaana dadka ganacsatada waratada ah lagu amray inay ka guuraan goobaha ay ku ganacsadaan.
Ganacsatada Dukaamada leh ayaa ku doodaya kuwa waratada ah inay keenaan saxmad badan iyo Suuq xiran ku aadan Dukaamada wax laga iibsado.
Somali badan ayaa waxa ay goobo ganacsi oo waaweyn ku leeyihiin Xaafada Islii ee Magaalada Nairobi oo ah halka ay degan yihiin inta badan dadka ganacstada Somalida ah.